जापानमा बौद्ध धर्मको संक्षिप्त इतिहास
जापानमा बौद्धता: एक संक्षिप्त इतिहास
सताब्दी पछि, आज जापानमा बौद्ध धर्म मर्नु हो?
यसले भारतमा जापानबाट यात्रा गर्न बौद्धको लागि धेरै शताब्दी लिनुभयो। एकपटक जापानमा बौद्ध धर्म स्थापना भएको भए, तथापि, यो फिसल्यो। बौद्ध धर्मले जापानी सभ्यतामा अनावश्यक प्रभाव पारेको थियो। एकै समयमा, बौद्ध धर्मका स्कूलहरूले मुख्य भूमि एशियाबाट आयात गरेको विशिष्ट जापानी बनेको थियो।
जापानको बौद्ध धर्म परिचय
छैटौं शताब्दीमा - 538 वा 552 ई.पू., कुन इतिहासकार एक जनाको आधारमा - कोरियाली राजकुमारले पठाएको एक प्रतिनिधिमण्डल जापानको सम्राटको अदालतमा आइपुगे।
कोरियालीहरूले बौद्ध स्त्र्रा, बुद्धको चित्र, र कोरियाली राजकुमारले धर्मको प्रशंसा गरे। यो जापानको बौद्ध धर्मको आधिकारिक परिचय थियो।
जापानी अभिवादनले तुरुन्तै समर्थक र बौद्ध गुटहरूमा विभाजन गर्यो। बौद्ध धर्मले इम्प्रेस सुको र उनको दर्ता, राजकुमार शोटोकू (592 देखि 628 सीई) शासनकाल सम्म सम्मको वास्तविक वास्तविक स्वीकृति प्राप्त गरेन। इम्प्रेस र प्रिंसले राज्य धर्मको रूपमा बौद्ध धर्म स्थापना गरे। तिनीहरूले कला, दर्शन र शिक्षामा धर्मको अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिए। तिनीहरूले मन्दिर बनाइदिए र मठहरू स्थापित गरे।
त्यस पछि शताब्दीहरूमा जापानको बौद्ध धर्मले बलियो रूपमा विकास गर्यो।7औं शताब्दीको दौडान चीनमा बौद्ध धर्मले "सुनहरा युग" पायो र चीनी भिक्षुले अभ्यास र विद्यार्थीलाई जापानमा नयाँ विकास ल्याए। चीनमा विकसित भएको बौद्ध धर्मका थुप्रै स्कूलहरू पनि जापानमा स्थापित भए।
नारा बौद्ध धर्म को अवधि
7 औं र 8 औं शताब्दीमा जापानमा बौद्ध धर्मका6वटा स्कूलहरू उभिए र सबैमध्ये दुई जना हराएका छन्। यी विद्यालयहरू प्राय: जापानी इतिहासको नारा नारा (70977979) को समयमा फलाएको थियो। आज, तिनीहरू कहिलेकाहीँ नारा बौद्ध धर्मको रूपमा एक श्रेणीमा एकसाथ लुगा हुन्छन्।
दुईवटा स्कूलहरू जुनसुकै पछि लागेका छन् होस र केगोन हुन्।
होस। होसो, वा "धर्म चरित्र," विद्यालय, जापानमा मोन डोको (696 देखि 700) सम्म पेश गरिएको थियो। दोशू चीन-भिआन-tsang, वी-शह (फेफ-हाईईङ भनिन्छ) को संस्थापकको साथ अध्ययन गर्न चीन गए।
वीआई-शहले भारतको योगगारा स्कूलबाट विकसित गरेका थिए। धेरै सजिलै, योगगाराले सिकाउँछ कि चीजहरू आफैमा कुनै वास्तविकता छैन। हामीले वास्तविकतालाई विचार गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नका लागी वास्तविकता थाहा छैन।
Kegon। 740 मा चिनियाँ भिक्षु शेन-हाईईङ्गले ह्वायन, वा "फूल ग्यालल्याण्ड" जापानलाई जापानलाई परिचय दिए। जापानमा केगोनलाई फोन गर्दै, बौद्ध धर्मका यो स्कूल सबै शिक्षाहरूको अन्तर्वार्तामा यसको शिक्षाको लागि जानिन्छ।
यो, सबै चीजहरू र सबै प्राणीहरूले अरू सबै चीजहरू र प्राणीहरूलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन तर यसको समग्रतामा निरपेक्ष पनि हुन्छ। इंद्रको नेटको उपकर्मकले सबै चीजहरूको अन्तरक्रियाको यो अवधारणालाई व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ।
724 देखि794सम्म शासन गरे सम्राट शूमो, किगोनको संरक्षक थियो। उहाँले नारामा उत्कृष्ट महाजीव वा महान् पूर्वी मठ का निर्माण शुरु गर्नुभयो। Todaiji को मुख्य हल यस दिनको संसारको सबैभन्दा ठूलो काठको निर्माण हो। यो नारा को महान बुद्ध घर मा स्थित छ, एक विशाल पीतल वाला आकार छ जो 15 मीटर, या लगभग 50 फीट लंबा छ।
आज, टोडीजई केईगोन विद्यालयको केन्द्र रहेको छ।
नारा अवधि पछि, जापानमा बौद्ध धर्मका पाँच अन्य विद्यालयहरू उभिए जसले आजको महत्त्वपूर्ण रह्यो। यी तन्डेई, शिंगन, जोडो, जेन र निचेरेन हुन्।
Tendai: लोटस सुत्रमा फोकस
भिक्षु साचो (767 देखि 822 सम्म; डन्यो देवी को पनि भनिन्छ) 804 मा चीन भ्रमण गरियो र टिइडीई स्कूल को सिद्धान्त संग निम्नलिखित वर्ष फर्के। जापानी रूप, तन्देही, ठूलो महत्व बढ्यो र शताब्दीका लागि जापानमा बौद्ध धर्मको एक प्रमुख विद्यालय थियो।
टिन्डई दुई विशिष्ट विशेषताहरूको लागि उत्कृष्ट छ। एक, यसले लोटस सुत्रलाई सर्वोच्च सूत्र र बुद्धका शिक्षाहरूको उत्तम अभिव्यक्ति मानिन्छ। दोस्रो, यसले अन्य विद्यालयका शिक्षाहरू, विरोधाभासहरू समाधान गर्न र बिस्तारै बिस्तारै बीचको मध्य पत्ता लगाउँदछ।
जापानी बौद्ध धर्मको साचोको अर्को योगदान क्योटोको नयाँ राजधानी नजिकैको माउन्ट हेइईमा ठूलो बौद्ध शिक्षा र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भएको थियो।
हामी देख्नेछौं, जापानी बौद्ध धर्मका धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तिहरू माउन्ट हेई मा बौद्ध धर्मको अध्ययन सुरु भयो।
शिंगन: जापानमा भिजुरेना
साचो जस्तै, भिक्षु कोुकई (774 देखि 835; कोबो डेसी भनिन्छ) 804 मा चीनमा यात्रा भयो। त्यहाँ उनले बौद्ध धर्मको अध्ययन गरे र दुई वर्षपछि शिंगनको विशिष्ट जापानी विद्यालय स्थापना गर्न फर्के। तिनले क्योटोको लगभग 50 माइल दक्षिण माउंट कायामा एक मठ निर्माण गरे।
शिंगन केवल भिजिरेना को एकमात्र गैर-तिब्बत विद्यालय हो । Shingon को धेरै शिक्षा र अनुष्ठान रहस्यमयी छन्, मौखिक रूपमा शिक्षक देखि विद्यार्थी ले, र सार्वजनिक गरेन। शिंगन जापानमा बौद्ध धर्मको सबैभन्दा ठूलो स्कूलमा रहेको छ।
जोडो शू र जोडो शिन्शु
आफ्नो बुबाको मर्दा इच्छाको सम्मान गर्न, हिन (1133 देखि 12 12) माउन्ट हेई मा भिक्षु बन्यो। बौद्ध धर्मसँग असन्तुष्ट हुँदा यो उनीहरूलाई सिकाइएको थियो, हीनले जोडे शूको स्थापना गरेर जापानलाई शुद्ध भूमिको जापान ल्याएको थियो।
धेरै सरल, शुद्ध भूमि विश्वास गर्दछ बुद्ध अमिताभ (जापानी मा अमेडा बसू) जसको माध्यम ले एक शुद्ध भूमि मा पुनरुत्थान हुन सक्छ र निर्वाण नजिकको हुन सक्छ। शुद्ध भूमि कहिलेकाहीं एमिडियावाद भनिन्छ।
हेननले अर्को माउन्ट हिई मोनलाई बदलिदिए, शिनरान (1173-1263)। शिनरन6वर्षको लागि हीनको चेला थियो। हेनन 1207 मा निर्वासित भएपछि, शिनरनले आफ्नो भिक्षुको लुगा, विवाहित र बुबा छोराछोरीलाई छोडे। एक तहका रूपमा, उहाँले जोप्पोलीहरूको बौद्ध धर्मको जोदो शिनसु, स्थापना गर्नुभयो। आजको जोशी शिनू जापान जापानको सबैभन्दा ठूलो समूह हो।
जेन जापान पुग्छ
जापानको जेनको कथा इइसाई (1141 देखि 1215) सम्म रहेको छ, एक भिक्षु जसले माउन्ट हेई मा आफ्नो अध्ययन छोडे चीनको चान बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्न।
जापान फर्केर फर्कनुअघि उहाँ रिन्जा शिक्षक हुसे-ए होई-चानको धर्म वरिष्ठ भए। यसरी इइसाई पहिलो चान्डन भयो - वा जापानमा जेन मास्टर ।
इईईईले स्थापना गरेको Rinzai वंश समाप्त हुनेछैन; जापानमा रिन्जा जेन आज शिक्षकहरूको अन्य भागबाट आउँछ। अर्को भिक्षु, जसले ईसीईमा छोटो अध्ययन गरे, जापानको जेनको पहिलो स्थायी विद्यालय स्थापना गर्नेछ।
1204 मा, शोगुनले इइसाईलाई केनेन-जीको क्योटोमा एक मठको बाबाको रूपमा नियुक्त गरे। 1214 मा, एक किशोर मोहम्मद डगेन (1200 देखि 1253) नामक जेन अध्ययन गर्न केएनन-ले आए। जब इइईईईलाई अर्को वर्षको मृत्यु भयो, डोगेनले ईइईईको उत्तराधिकारी, म्याोजोजेनसँग जेन अध्ययन जारी गरे। डगेनले हार्म ट्रांसमिशन प्राप्त गर्यो - जेन मास्टरको रूपमा पुष्टिकरण - 1221 मा म्याोजोजेनबाट।
1223 मा डगेन र माउजोजेन चान्ते मास्टरहरूको खोजी गर्न चीन गए। डिएननले प्रकाश को गहन पहिचान को अनुभव गरे जबकि T'ien-t'ung Ju-ching, एक सटो मास्टर संग अध्ययन गरे, जसले कुत्ते धर्म संचरण पनि दिए।
डगेन 1227 मा जापान फर्किए जुन बाँकी जीवन जीन सिकाउन बाँकी छ। कुवेत आज सबै जापानी सटो जीन बौद्धहरूको धर्म अभिनेता हो।
उनको शरीर को लेखन, Shobogenzo , या " सच्चा धर्म आँखा को खजाने " भनिन्छ, जापानी जीन, खासकर कोटो स्कूल को केन्द्रीय बनी। यो जापानको धार्मिक साहित्यको उल्लेखनीय कार्यहरू पनि विचार गरिएको छ।
निरिइरिन: एक फरिरी रिफर्मर
निरिइरिन (1222 देखि 1298) एक भिक्षु र सुधारकर्ता थियो जो बौद्ध धर्म को सबै विशिष्ट जापानी जापानी विद्यालय को स्थापना गरे।
माउन्टेन हेईई र अन्य मठहरूमा अध्ययन गर्न केही वर्षपछि निचेनले विश्वास गरे कि लोटस सुत्र बुद्धका सम्पूर्ण शिक्षाहरू समाहित थिए।
उनले डेमोकु बनायो, एक शब्द वाक्यांश को नाम Nam Myoho Renge Kyo (लोटस सूत्र को भक्ति) को एक सरल, सीधा रास्ता को रूप मा प्रकाश को भावना को रूप मा।
निकिइरन पनि ईर्ष्यामा विश्वास गरे कि जापानको सबै लोटस सुत्रद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ वा बुद्धको संरक्षण र पक्ष गुमाउनु पर्छ। उनले बौद्ध धर्मका अन्य विद्यालयहरूलाई विशेष गरी शुद्ध भूमिको निन्दा गरे।
बौद्ध प्रतिष्ठान निचेनसँग नाराज भएको थियो र उनको बाहिरी जीवनका अधिकांश समय बितिसकेका निर्वासनहरूको एक श्रृंखलामा पठायो। यद्यपि, तिनले अनुयायी प्राप्त गरे, र उनको मृत्युको समयमा, निचेन बौद्ध धर्मलाई जापानमा स्थापना गरिएको थियो।
जापानी बौद्धता निचेइरन पछि
निचेइरन पछि, बौद्ध धर्मको नयाँ प्रमुख स्कूलहरू जापानमा विकसित भए। यद्यपि, विद्यमान विद्यालयहरू बढेको, विकसित, विभाजन, फ्यूज गरिएका, र अन्यथा थुप्रै तरिकामा विकसित भए।
मुरोमाची अवधि (1336 देखि 1573)। जापानी बौद्ध संस्कृति 14 औं शताब्दीमा फैल्यो र बौद्ध प्रभाव कला, कविता, वास्तुकला, बागवानी र चिया समारोहमा प्रतिबिम्बित भएको थियो।
Muromachi अवधि मा, विशेष रूप देखि तेंदई र शेिंगन स्कूलहरु जापानी महानता को पक्ष को आनंद ले। समयमा, यो पक्षमा एक पक्षपातवादी प्रतिद्वंद्वीको नेतृत्व भयो, जुन कहिलेकाहीं हिंसक भए। माउंट केया मा शानिंग मठ र माउंट हाइई मा तेंदई मठ योद्धाहरु द्वारा योद्धाहरु को रक्षा गरे। Shingon र Tendai पुजारीले राजनीतिक र सैन्य शक्ति पायो।
मोमोयामा काल (1573 देखि 1603)। युद्धपार्ड ओडा नोनगागाले 1573 मा जापान सरकारलाई पराजित गर्यो। उनले माउन्ट हेइ, माउंट काया र अन्य प्रभावशाली बौद्ध मंदिरहरूमा पनि आक्रमण गरे।
माउंट हेइइको अधिकांश मठ नष्ट भयो र माउंट कोयालाई राम्रो बचाव गरिएको थियो। तर, नोनागुगाको उत्तराधिकारी टोयोटोमी हाइडईशीशीले बौद्ध संस्थाहरूको दमन जारी राखे, जबसम्म उनी सबैले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याए।
ईडो अवधि (1603 देखि 1867)। टोकुगावा इयौसुले अब टोक्योमा 1603 मा टोकुगावा शोगुनेट स्थापना गरे। यस अवधिको दौरान, अरूकोगागा र हिडिओशीद्वारा नष्ट गरिएका मन्दिरहरू र मठहरू पुनर्निर्माण गरियो, यद्यपि किलाहरू जस्तै पहिले नै थिए।
तथापि, बौद्ध धर्मको प्रभावले अस्वीकार गर्यो। बौद्ध धर्म शिनोटो - जापानी स्वदेशी धर्म - साथै कन्फ्यूनिओनिज्मको प्रतिस्पर्धाको सामना गर्यो। तीन प्रतिद्वंद्वी अलग गर्न को लागी, सरकार ले धर्म को मामला मा बौद्ध धर्म को ठाँउ हुनेछ, Confucianism मा नैतिकता को मामला मा पहिलो स्थान हुनेछ, र Shinto राज्य को मामला मा पहिलो स्थान हुनेछ।
मीजी अवधि (1868-1912)। 1868 मा मेई बहाली को सम्राट को शक्ति को पुनर्स्थापित गर्यो। राज्य धर्ममा, शिन्टो, सम्राट एक जीवित ईश्वरको रूपमा पूजा गरिएको थियो।
तथापि, सम्राट बौद्ध धर्ममा एक देवता थिएन। यसकारण मेजी सरकारले 1868 मा बौद्ध धर्मलाई त्याग्ने आदेश दिएका थिए। मन्दिरहरू जलाए वा नाश गर्थे र पूजाहारीहरू र भिक्षुहरूलाई जीवनमा फर्कन बाध्य भए।
तथापि, जापानको संस्कृति र इतिहासमा बौद्ध धर्म धेरै गहिरो छ। अन्ततः, न्यानोपन हटाइयो। तर मेजी सरकार अझै बौद्ध धर्म संग गरेन।
1872 मा मेई सरकारले यो निर्णय गर्यो कि बौद्ध भिक्षुहरु र पुजारीहरू (तर नननहरू) त्यस्ता छनौट गर्ने छनौट गर्न विवाह गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। चाँडै "मंदिर परिवारहरू" सामान्य भए र मन्दिर र मठहरूको प्रशासन पारिवारिक कारोबार भयो, बुबाबाट छोराहरूलाई छोराछोरीलाई दिए।
मेजी अवधि पछि
यद्यपि निशिरनबाट बौद्ध धर्मको कुनै नयाँ प्रमुख स्कूलहरू स्थापित भएन, त्यहाँ प्रमुख सेकेन्टहरू बढ्दै जाँदाको अन्त्य छैन। त्यहाँ "फ्युजन" सेक्ट्सको कुनै पनि एक जना भन्दा बढी बौद्ध विद्यालयबाट संकुचित भएको थियो, प्रायः शिन्टो, कन्फ्यूनिआइजनिज्म, टोओवादका तत्वहरू, र हालैमा, ईसाई धर्म पनि फसेको थियो।
आज, जापान सरकारले बौद्ध धर्मको 150 देखि अधिक स्कूलहरू पहिचान गरेको छ, तर प्रमुख विद्यालयहरू अहिले नै नारा (अधिकतर केगोन), शिंगन, टिन्डई, जोडो, जेन र निचेरेन हुन्। यो जान्न गाह्रो छ कि कति जापानी जापानी विद्यालय संग सम्बद्ध छ किनकी धेरै मान्छे एक भन्दा बढी धर्म को दावा गर्छन।
जापानी बौद्ध धर्मको अन्त?
हालैका वर्षहरूमा, धेरै समाचार कथाहरू बताइएको छ कि जापानमा बौद्ध धर्मलाई विशेष गरी ग्रामीण इलाकामा मृत्यु भएको छ।
पीडितहरूका लागि, धेरै साना "परिवारको स्वामित्व" मन्दिरहरू मजेदार व्यवसायमा एकता थियो र फौजदारीहरू उनीहरूको मुख्य स्रोत आय भए। संसद्ले आफ्ना पिताका पिताबाट स्थानान्तरण भन्दा बढि कर्तव्यबाट बचाउनुभयो। जब संयुक्त, यी दुइटा कारकहरूले धेरै जापानी बौद्ध धर्मलाई "मत्स्य बौद्ध धर्म" मा बनायो। धेरै मन्दिरहरू अरूलाई तर मजाक र स्मारक सेवा प्रदान गर्छन्।
अब ग्रामीण क्षेत्रहरु लाई डिपोलिलेट गर्दै छन् र शहरी केन्द्रहरुमा जापानी जीवन बौद्ध धर्म मा चासो खोने छ। जब साना जापानीले क्यानडाल व्यवस्थित गर्नु पर्छ, तिनीहरू बौद्ध मन्दिरहरूको भन्दा बढि बलियी घरहरूमा जान्छन्। धेरै जनाले फिर्तीहरू छोड्छन्। अब मन्दिरहरू बन्द छन् र बाँकी मंदिरहरूमा सदस्यता गिरिरहेको छ।
केही जापानीले दुर्व्यवहारमा फर्किन्छन् र भिक्षुहरूको अन्य पुरातन बौद्ध नियमहरू जुन जापानमा गुमाउन अनुमति दिएको छ। अरूले पूजाहारीपनलाई सामाजिक कल्याण र धैर्यतामा थप ध्यान दिन आग्रह गर्छन्। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि बौद्ध पूजाहारीहरूले जापानीहरूलाई फौजदारीहरू सञ्चालन गर्नुको साथै केही चीजको लागि असल हो भनेर देखाउँछन्।
यदि केहि पनि गरेन भने, साईचो, कुुकुआ, हनान, शिनरन, कुवेन र निचेन को बौद्ध धर्म जापानबाट हटाइनेछ?
बौद्ध धर्म मा Gassho इशारा
सामाजिक मीडियामा बुद्धि र मूर्खता
माता Sundri (सुंदरारी कौर) को जीवनी, गुरु गोबिन्द सिंह को2पत्नी
भगत कबीर (1398 - 1518)
यूहन्नाको बाइबलको बप्तिस्मा के थियो?
Paramitas: Mahayana of Ten Perfections बौद्ध
मेलबर्न को रामबो दादी
Dolní Vestonice (चेक गणतन्त्र)
नरक को गेट्स डेवेवेज, तुर्कमेनिस्तान मा
क्रुसिबल - ए चुनौतीपूर्ण मास्टरस्पेस
फ्रंटियरो वी। रिचर्डसन
शीर्ष 10 एक्स गीतहरु
किन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल र म कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
Verse / Chorus / Bridge Song Form
टेलिफोन कसरी थियो
अमेरिकी नागरिक युद्ध: रेमंडको युद्ध
वैज्ञानिक विधिको चरण
देश संगीत संगीत जो माया र चोरीको जीवनी
एक गैलरीको अंश
2009वाकर कप: म्याच स्कोर, टीम रोस्टर्स, प्लेयर रेकर्डहरू
पोकरमा स्ट्रडल प्ले गर्दै
कर भुक्तानीको बारेमा शीर्ष गीतहरू
के विज्ञान सिद्ध हुन सक्छ?
बेल र रप्पल उपकरणहरू
20 मजेदार पशु मेम
बौद्धता र समानता
एक बेस इतिहास को बेसबल
2009यूएस ओपन: बेटप्याक्स ब्लक मा सुल्ज बचाउन
Protoceratops vs Velociraptor: कसले जित्छ?